भाइरल फेस एप : सुरक्षित छैन १० कराेडभन्दा बढीकाे फाेटाे र नाम ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
साउन २, २०७६ बिहिबार १२:१४:३४ | एजेन्सी
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा एप भाइरल भैरहेको छ । मानिसहरुले 'म भविष्यमा कस्तो देखिन्छु' भन्दै धमाधम तस्बिर शेयर गरिरहेका छन् ।
भाइरल एप ‘फेसएप’ ले मानिसलाई उनीहरुको अनुहारको हाउभाउ, लुक्स र भविष्यको अनुहारको नक्सा पनि हेर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । तर यो कत्तिको सुरक्षित छ त ?
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले ‘फेसएप’ आफ्नो तस्बिर उसले चाहेअनुसारको बनाउने अधिकार दिएका छन् । ‘फेसएप’ ले जुनसुकै प्रयोजन र जुनसुकै बेला प्रयोगकर्ताहरुको तस्बिरको प्रयोग गर्नसक्नेछ ।
केही समयअघि मात्रको क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले घटनाले हामीलाई पाठ सिकाइसकेको छ । फेसबुकमाथि आठ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताको डाटा लिक गराएको आरोपमा साढै ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारबाही रकम सिफारिस गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म १० करोड बढीले गुगल प्ले स्टोरबाट 'फेसएप' एप डाउनलोड गरिसकेका छन् । एप एन्नीका अनुसार, यो एप आईओएस एप स्टोरमा १२१ देशमा पहिलो नम्बरमा छ ।
'फेसएप' को सेवाका शर्तहरु अनुसार, यो एपले प्रयोगकर्ताको फोटोलाई चाहेको समयमा जसरी पनि उपभोग गर्नसक्छ । यो एपसँग कहिल्यै पनि समाप्त नहुने र अपरिवर्तनीय रोयल्टी–फ्री लाइसेन्स छ, जसको माध्यमबाट कम्पनीले जे पनि गर्नसक्छ र जोकसैको अगाडि गर्नसक्छ ।
के लेखिएको छ, फेसएपको सेवा र शर्तमा–
'फेसएप' ले तपाईँलाई सधैँ, अपरिवर्तनीय, कुनै पनि प्रशंसनीय, रोयल्टी–मुक्त, विश्वभरि, पूर्ण रुपमा प्रयाेगसहित, हस्तान्तरण गर्न मिल्ने लाइसेन्सको उपयोग गर्न, पुनः पेस गर्न, संशोधन गर्न, प्रकाशित गर्न, अनुवाद गर्न, वितरित गर्न, सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न सक्छ । उपयोगकर्ताको सामग्री र नामलाई चाहे अनुसारको प्रयोजनमा लागू गर्न सक्नेछ । तपाईँको सम्पूर्ण जानकारी (तस्बिर, जानकारी) सार्वजनिक गरिन्छ ।
रुसी कम्पनीसँग प्यारेन्ट अधिकार भएकाे याे एप रुसी जासुसी संस्थाले नै प्रयाेग गर्छ भन्ने त हाेइन तर याे प्रयाेग गर्दा नकारात्कम असर भने पर्छ । फोनएरिनाका पिटर कोस्टादिनोव भन्छन्, ‘तपाईँ मस्को शहरको कुनै एक बिलबोर्डमा टाँगिन सक्नुहुन्छ । तर तपाईँको अनुहारको एआई–फेसियल पहिचान अल्गोरिदम प्रशिक्षण गराइन्छ ।’
तर बितेका केही वर्षमा भाइरल फेसबुक एपबाट हामीले धेरै पाठ सिकेका छौँ । ती एपले संकलन गरेका तथ्याङ्क हामीले सोचेअनुरुप प्रयोग नहुन सक्छ । र संकलन गरिएका तथ्याङ्क सधैँ सुरक्षित र व्यक्तिगत हुन्छन् भन्ने छैन ।
'फेसएप' ले वास्तवमा काम गर्नका लागि यसले तपाईँको सबै तस्बिरसम्म अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर पृष्ठभूमिमा पनि फेसएपले काम गरिरहेको हुन्छ र तपाईँले प्रयोग नगरेको समयमा पनि यसले तपाईँलाई उपयोग गरिरहेको हुन्छ ।
'फेसएप' आजकाे भाेलि नै तपाईँलाई हानी पुर्‍याउने काम त गर्दैन तर पनि तपाईँले दिएका व्यक्तिगत सूचना र जानकारीकाे गलत प्रयाेग नहाेला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ।
- फाेर्ब्स डट कमबाट